China YF-H-802-2 Black Buffet Table 2 &zọ & 3 Drawers Manufacturer and Supplier | Yifan
YF-H-802-2 Black Buffet Table Isiokwu 2 Ọnụ ụzọ & 3 Drawers
Featuring a rich gold steel steel steel, a pụtara sideboard kabinet enye a nkecha, dịkọrọ ndụ aka ka ndụ gị ohere.
Isiokwu oge 1200 / 1500mmL * 400mmW * 850mmH
Gụgharia ma rụọ ọrụ, tebụl a na-eri nri na-egosipụta silhouette akụkụ anọ na ịdị mma mara mma iji weta mmetụta nke oge a.
Oche abụọ na drawer atọ na-enye ohere zuru oke iji chekwaa ihe dị mkpa na kichin
Ejiri nlezianya dozie nkọwa ahụ iji jide anya gị ma mepụta mpempe akwụkwọ na-akpali akpali. Onye na-ese ihe edoziwo ma nụchaa nke ọma ọtụtụ oge iji chọta ọdịdị zuru oke. O were ihe karịrị afọ abụọ iji rụchaa ọrụ ya. Nsonaazụ a bụ ọmarịcha, ma hazie ya na nkọwa ikpeazụ ọ bụla. Ọ dịghị ihe ọ bụla hapụrụ na ohere. Tere, gbanye ụkwụ na ọrụ nrụgide na-emeghe na-agbakwunye na ọmarịcha imewe. Dị ka otu onye, ​​ibe ahụ na-adọrọkwa anya. Ndị hụrụ imewe n'anya na-enwekarị mmasị na nkọwa dị ka agba agba.
mmebe sideboard featuring ozu na n'ihu na-acha ọcha lacquer ma ọ bụ planked akpu dị dị iche iche widths si 400 cm ka ihe ruru. Ọ na-enye ohere zuru oke maka akwụkwọ nri na iko dị na drawer, n'azụ flaps, ibo ụzọ na ụzọ mpịachi.
IHE: Ihe: etiti: igwe anaghị agba nchara electroplated ọlaedo na agba, n'elu: MDF, enyo iko ọlaedo acha. High quality laminated board (eguzogide mmebi na ọkọ, mmiri mmiri na elu okpomọkụ) ezigbo ezigbo gloss ọcha imecha nwere eke na-enwu nke na-egosipụta ọkụ mara mma.
Ugbu a! mfe modular usoro bụ nnọọ fabulous: Nke a mmebe sideboard ọcha ọcha lacquer nwere ike na-akwado na ụkwụ, enịm ogologo n'ala ma ọ bụ na-mgbidi-ndokwasa. Idebe ihe ọcha dị mfe, ebe ihe onwunwe gị na-achọta ụlọ na drọwa ma ọ bụ n'azụ ụzọ mechiri emechi.
Ejiri 6 dọọ, ọ bụ ezigbo enyi maka ime ụlọ iri nri na ime ụlọ. Naanị ị ga-ekpebi ụdị agba kacha mma n'ụlọ gị. High-gloss Blck? Ma ọ bụ kama Mat ọcha?
Nke gara aga: YF-H-802 nwere ihu igwe dị mma nke nwere tebụl n'oge a maka kichin
Osote: YF-H-803 Nnukwu nri nkuru n'onwe Isiokwu bi n'ime ụlọ
YF-H-804 Gold Leaf Wave Frontet buffet Sideboard